‘बामपन्थी गठबन्धनले भारतलाई खुट्टामा बन्चरो बजारेजस्तै भएको छ’ : चित्रबहादुर केसी « Dhankuta Khabar
‘बामपन्थी गठबन्धनले भारतलाई खुट्टामा बन्चरो बजारेजस्तै भएको छ’ : चित्रबहादुर केसी
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी पछिल्लो पटक बनेको बामपन्थी सहकार्यबाट निकै खुसी देखिनुहुन्छ । एमाले र माओवादीले सुरु गरेको एकता अभियानले राष्ट्रियता र विकासलाई सहयोग पुग्ने वताउनुहुने केसी बाम गठबन्धनसँग आफ्नो पार्टीले पनि चुनावी सहकार्य गर्ने वताउनुभयो । जुनसुकै विषयमा स्पष्टवक्ताको छवी बनाउनु भएका केसीसँग बामपन्थी एकताबारे चक्रपथ डटकमका लागि बिनु पोखरेलले गरेको कुराकानीः
धेरै बामपन्थी दल एकै ठाउँमा रहेर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार थियो । तपाईं पनि उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर त्यो सरकार हठात ढालियो । आज फेरि धेरै बाम एक ठाम भएजस्तैगरी गठबन्धन बनेको छ । के त्यहि गठबन्धन ब्यूँतिएको हो ?
अहिलेलाई यति बुझ्नुस् कि यो चुनावको कसरत हो । संसदीय प्रणालीमा चुनाव जित्ने कुरा सबैभन्दा ठूलो हुन्छ । चुनावमा धेरै सिट जितेपछि सरकार बनाउन पाइन्छ । सरकार बनाएपछि आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न पाइन्छ । अहिलेको मुख्य ध्येय भनेको प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा बढी भन्दा बढी सफलता प्राप्त गर्ने कुरामा केन्द्रित छ । बाम एकता भयो भने यिनीहरुले सोचे भन्दा बढी सफलता प्राप्त गर्छन् । आफू चाहिँ पछाडि पर्छु भन्ने लोकत्रान्त्रिक भनिने कांग्रेसको विश्लेषण छ । त्यसैलाई लिएर अब साम्यवाद आउने भो, अनिष्ट हुने भो भन्ने अनर्गल कुरा आइरहेका छन् । हिजोसम्म तिनैसँग मिलेर सत्तामा रजाईं गर्दा केहि अनिष्ट नहुने, आज अर्कोसँग तिनै मिल्दा चाहिँ साम्यवाद आइहाल्ने हुन्छ ? यो सबै वाहियात कुरा हो ।
कांग्रेस आफ्नै गलत कामले आतंकित भएको छ । किन आतंकित भएको छ भने एमालेले स्थानीय तहको चुनावमा एक्लै लड्दा पनि बटारबुटुर पार्यो । अब त्यसमा माओवादी पनि थपिएपछि कांग्रेसको त हुनु विजोग भयो नि । त्यसमाथि देउवा रेणु दाहालको चुनावमा प्लेन चढेर भोट हाल भन्न पुग्नु भएको थियो । अधिनायकवादीलाई जिताउन किन प्लेन चढेर भरतपुर जानु भो त ?
संसद भित्रका जति पनि दलहरु छन् नि, तिनका आचरण, चरित्र र बानी ब्यहोरामा के फरक छ ? यो सब देख्दादेख्दै, जान्दाजान्दै प्रचण्ड र ओली मिलेपछि साम्यवाद ल्याउँछन् भन्नु जनतालाई झुक्याउनु मात्र हो । कांग्रेस जनतामा साम्यवादको आतंक मच्चाएर चुनावी फाइदा लिन चाहान्छ । त्यसैले अनर्गल हल्ला फैलाउँदै चिच्याइरहेको छ । ओली र प्रचण्ड मिल्ने वितिक्कै पनि उनीहरुले साम्यवाद ल्याइहाल्न सक्दैनन् । ल्याइहाल्ने उनीहरुको चरित्रले पनि देखाउन्न । कसले के ल्याउन खोजेको छ, यो जनताले देखेकै छन् ।
अहिले मुलुकको समस्या के हो भने यो गणतान्त्रिक संविधान, लोकतान्त्रिक संविधानलाई आफ्नो अनुकुल जारी गराउन भारत चाहन्थ्यो । अब यहाँका नेताले जति गल्ती गरेपनि, संविधान घोषणा नगर्न भारतले त्यत्रो दवाव दिएपनि, उनीहरुले संविधान जारी गर्न जुन दृढता देखाए त्यो स्वागतयोग्य कुरा थियो । तर जारी नै गरेपछि पनि संशोधनद्वारा त्यसलाई आफ्नो अनुकुलको बनाउन भारत कम्मर कसेरै लागेको छ । संविधानमा नै लेखाएर तराईलाई पहाडबाट अलग गराउने भारतीय डिजाइन अहिले पनि निरन्तर छ । सत्ता र शक्तिमा जानको लागि अस्ति मात्र दोस्रो संशोधनमा यहाँ बंसजमा जन्मिएका नेपाली कोही नभए झैं अंगीकृत नागरिक राष्ट्रप्रमुख, प्रधानमन्त्री, सेनाप्रमुख, न्यायलयको प्रमुख पाउन पर्छ भनेर ३४७ जनाले त संशोधनको पक्षमा भोट नै दिए नि । अनि देखिएन त, यहाँ सत्ताको लागि जहाँ जस्तोमा पनि भोट खसाउन तयार हुने छन् भनेर ?
नेपाली आमा बाबु भएको बशंजको नागरिक मात्र नेपालका प्रमुख पदमा रहन पाउने ब्यावस्था हुँदाहुँदै फेरि उताबाट आएको संशोधनको मुद्दालाई प्रमुख बनाएर अगिकृतलाई पनि नेपालको प्रमुख पदमा जान सक्ने ब्यवस्था गर्न त्यति धेरै सांसदले भोट खसाए । त्यसैले यो जुन संविधान हामीले तयार गरेका छांै, यसलाई संशोधन मार्फत तोडमोड गराएर खत्तम पर्ने डिजाइन छ छिमेकको । त्यसरी भारतको चाहना अनुसार सत्ता र शक्ति बनाउन संशोधनको खेल भैरहेको छ । त्यो खेल असफल पार्नका लागि यो बामपन्थी गठबन्धन तयार भएको हो ।
यो गठबन्धन बनेपछि छिमेकी भारत पनि रिसाएको होला नि ?
हो, हिजो ओली र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने वितिक्कै दिल्लीमा भुइँचालो गयो नि, देख्नु भएन ? तिनीहरु कति छटपटाएका थिए, सवैले देखेकै कुरा हो । ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार ढाल्न उनीहरुले के के गरे त्यो पनि सबैले देखेकै हो ।
भनेपछि अहिलेको बाम गठबन्धन बन्दा पनि भारतमा त्यहि रेक्टर स्केलको भूकम्प जाने भो हैन त ?
बामपन्थी गठबन्धन छिमेकीलाई खुट्टामा बन्चरो बजारे जस्तै भएको छ । यहिँका त्यत्रा ३४७ जना सांसद उसकै एजेण्डा पास गर्ने तयारीमा थिए । अब यदि यो गठबन्धनको सरकार भयो भने त्यो त सम्भव हुन्न । त्यसैले भारत खुसी हुने त कुरै भएन । हिजो जति उकुसमुकुस थियो, आज बामपन्थी गठबन्धनको कुराले त्यस्तै उकुसमुकुस भएको छ भारतलाई । किनभने ओलीको कार्यकालमा नेपालको हितमा काम भए । अव पनि ओली नै आए भारतले आफ्ना एजेण्डा पार्न सक्दैन ।
त्यसोभए योे गठबन्धन हिजोको जस्तै सरकार बनाउने तयारी हो भनेर बुझ्दा हुन्छ ?
हिजोकै गठबन्धन भत्काउन हुँदैनथ्यो । त्यो देखीसहेन छिमेकीले । कांग्रेसलाई निन्द्रै लागेन । महरालाई दिल्ली झिकाइयो । शेरबहादुर दिल्ली गए । फर्केर आएपछि अब आफ्नो सरकारको विरुद्धमा आफैं अविश्वास प्रस्तावक भएको दुनियाँमा कहिँ देख्नु भएको छ ? त्यहि गरे र सरकार ढाले । त्यहि गरेर सरकार ढाल्नेसँग अहिले फेरि चुनावी तालमेल छ । पार्टी एकताको कुरा पनि आएको छ । यति गर्नेले किन सरकार ढालेको ? त्यति बेलैदेखि अहिलेसम्म त्यो सरकार रहेको भए देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो ? तर सत्ता र शक्तिले माओवादीलाई खायो । फेरि एकपटक बुद्धि फिरेको छ, यो असाध्यै राम्रो कुरा हो ।
बामपार्टीको एकताको कुरा आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ ?
कांग्रेसले पटक पटक बहुमतको सरकार चलायो । ३८ वटा राष्ट्रिय उद्योग कौडीको भाउमा बेचेर बन्द गरायो । त्यसले देशका ६० लाख युवालाई विदेशमा गैंची हान्न बाध्य छन् । यहाँ सयौं मेनपावर फस्टाएका छन् । तिनै मेनपावर चलाउनेहरु श्रम मन्त्री । मेनपावरको कारिन्दा त्यो देशमा राजदूत बनेर गएको छ । ल हेर्नुस् त, एकातिर उद्योग बेचेर जागिर छुटायो । अर्काेतिर जनता बिदेशमा बेच्ने कम्पनी खोल्यो, अनि उतै राजदूत बनेर गयो । उल्का छैन त ? देशलाई यस्तो बनाउने कांग्रेस साम्यवादको चित्र बनाइदिएर तिनै जनतालाई तर्साउँदैछ ।
मैले बुझेको चाहिँ अहिले यो चुनावी एकता हो । तर एकीकरणकै कुरा पनि आएको छ । यो कुरा पहिलो पटक सरकारमा रहंदा पनि आएको थियो । तर माओवादी भड्कियो । फेरि माओवादी सत्तामोहमा बिक्यो भने, कसरी पार्टी एकीकरण होला ? तर, अहिले जे भएको छ, राम्रो भएको छ । धेरै दल भएर केही पार लाग्दैन । सानो मुलुकमा थोरै दल भएकै राम्रो । एउटै विचार बोक्ने दुई पाँचवटा पार्टीमा विभाजन हुन जरुरी पनि छैन ।
तपाईंहरु पनि यो बाम एकतामा समावेस हुनुहुन्छ नि होइन ?
हो, तर हामी चुनावी एकतामा सामेल हुन्छौं । पार्टी एकतामा होइन । बाम गठबन्धनमा त हामी स्थानीय तहको चुनावदेखि नै सँगै छौं । यो संविधान कार्यान्वयनका पक्षधरहरुसँग हामी कार्यगत एकता गर्दै आएका छांै । हामी सरकारमा सामेल हुनुको कारण पनि त्यहि हो । संविधान कार्यान्वयन गर्न जटिल छ, कार्यान्वयन गर्नै दिन्नन् । अहिले पनि छिमेकीले त मानेको छैन । उसको अनुकुलको संशोधन नगरेसम्म कार्यान्वयन सम्भव छैन भनिरहेकै छन् ।
त्यसो भए यो चुनाव पछि बन्ने बामपन्थी सरकारमा तपाईंहरु पनि समावेश हुनुहुन्छ ?
होइन, अरुको लागि सरकार र शक्ति मुल कुरा होला । हाम्रो लागि सरकार गौण कुरा हो । संविधान कार्यान्वयन र देशलाई स्थिर सरकार दिंदै विकासतिर लैजाने कुरामा हामी जानै पर्ने भयो भने जनै पर्छ । तर, हामी बिनाकारण हरेक सरकारमा लाइन लागेर जाँदैनौं । हाम्रो लागि राष्ट्र, राष्ट्रियता र देशको अखण्डता प्रधान हो । यसैलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नेछौं ।
भारतको दवाव संविधान संशोधनमै छ भन्नुहुन्छ, अहिले एकचोटी त संविधान संशोधन भइसक्यो । त्यसले देशलाई नोक्सान भएको देखाउन सक्नुहुन्छ ?
किन नोक्सान भएन ? तपाईंहरु हेर्नुस् त । पहिलो संशोधन हुँदा जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने भनियो । जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भएको छ अहिले पनि । यसरी जाने हो भने के अव के हुन्छ मुलुकमा हेर्नुस् त ? हिमाल र पहाडका जनसंख्या कम भएका ठाउँको अव हविगत के हुन्छ हेर्दै जानुस् । धेरै जनसंख्या भएको १० प्रतिशत भूगोलले बाँकी सवै क्षेत्रलाई अन्यायमा पार्ने काम के होला ? दुर्गम गाउँ वस्तीको हालत के होला ? पहाड र हिमाललाई जनप्रतिनिधि बिहीन बनाउँदै लैजाने डिजाइन होइन यो ? अनि त्यस्तो बेला तिनका योजना बिफल बनाउन हामी सरकारमा जानु जरुरी हुन्छ भने जान्छौं ।
बाम गठबन्धनलाई चुनावी तालमेल भनिए पनि समग्रमा राजनीतिमा बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार गर्न बनाइएको भन्न खोज्नु भएको हो ?
जिष्ट कुरा त त्यहि हो, तर, त्यो पछिको कुरा भो । अहिलेलाई यो चुनावी रणनीति नै हो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, अखण्डताको पक्षमा हामी एक्लै पनि लडिरहेका छांै । यो गठबन्धनमा सामेल हुनेले देश विकास र राष्ट्रियताको पक्षमा कति काम गर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य हो । राम्रो काम गरे पूरै सर्मथन गरेर जाने हो । राष्ट्रियतालाई सौदाबाजी गरेर जाँदा त हाम्रो विरोध नै रहन्छ । अहिलेको मुख्य कुरा प्रदेश र केन्द्रको चुनावमा सफलता प्राप्त गर्न ध्रुवीकरण भएको हो ।
तपाईंका कुरा सुन्दा सरल छ, तर चुनाव जित्नका लागि बनेको गठबन्धनले साम्यवाद ल्याउँछ, अधिनायकवाद आउँछ किन भनेको होला त कांग्रेसले ?
२०४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसले चौध पन्ध्र पटक सत्ता चलायो । दुई पटक त उसले बहुमतको एकलौटी सरकार चलायो । त्यो बीचमा उसले मुलुक बनाउनुको सट्टा ३८ वटा राष्ट्रिय उद्योग कल कारखानालाई कौडीको भाउमा बिक्री गर्यो । विभिन्न मित्रराष्ट्रहरुले गरेर खाउन् भनेर दिएका त्यत्रा कलकारखाना निजीकरणको नाममा कौडीको मोलमा बिक्री गरेका होइनन् ? त्यसले हाम्रो राष्ट्रिय उद्योग टाट पल्टेको होइन ? हाम्रा युवाहरु बेरोजगार भएर अरवमा भेडा चराउन जानु परेको होइन ? कांग्रेसलाई भोट दिएर त्यत्रो समयसम्म जनताले के पाए ? भएको जागिर र रोजीरोटी जनताले गुमाए ।
हेर्नुस्, देशका ६० लाख युवायुवती देशमा भएका उद्योग बन्द हुँदा आज विदेशमा गैंची हान्न बाध्य छन् । त्यसैकारण यहाँ सयौं मेनपावर फस्टाएका छन् । अनि तिनै मेनपावर चलाउनेहरु श्रम मन्त्री हुन्छन् । जुन देशमा श्रमिक पठाउने हो, मेनपावरको कारिन्दा त्यो देशमा राजदूत बनेर गएको छ । जसले यहाँबाट मजदूर बेचेको छ, उसैले त्यहाँ गएर तिनको के भलो गर्छ ? ल हेर्नुस् त, एकातिर उद्योग बेचेर जागिर छुटायो । अर्काेतिर जनता बिदेशमा बेच्ने कम्पनी खोल्यो, अनि उतै राजदूत बनेर गयो । उल्का छैन त ? देशलाई यस्तो बनाउने कांग्रेस साम्यवादको चित्र बनाइदिएर तिनै जनतालाई तर्साउँदैछ ।
हिजो ओली र माओवादी मिलेर सरकार बनाउने वितिक्कै दिल्लीमा भुइँचालो गयो नि, देख्नु भएन ? तिनीहरु कति छटपटाएका थिए, सवैले देखेकै कुरा हो । ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार ढाल्न उनीहरुले के के गरे त्यो पनि सबैले देखेकै हो ।
बरु त्यो कांगे्रसले जान्दछ भने विगतमा जे गल्ती कमजोरी गर्यो, जनतामा आएर माफी माग्दै अब त्यस्तो हुँदैन भनेर जानु पथ्र्याे नि । कम्युनिस्ट पार्टीहरु मिलेर चनाव लड्न थाले, अव अधिनायकवाद आउँछ भनेर मनगढन्ते कुरा गरेर कांगे्रसलाई कसले पत्याउँछ ? यसरी कांग्रेसलाई फाइदा छैन । कांग्रेस आफ्नै गलत कामले आतंकित भएको छ । किन आतंकित भएको छ भने एमालेले स्थानीय तहको चुनावमा एक्लै लड्दा पनि बटारबुटुर पार्यो । अब त्यसमा माओवादी पनि थपिएपछि कांग्रेसको त हुनु विजोग भयो नि । त्यसमाथि देउवा रेणु दाहालको चुनावमा प्लेन चढेर भोट हाल भन्न पुग्नु भएको थियो । अधिनायकवादीलाई जिताउन किन प्लेन चढेर भरतपुर जानु भो त ? कांग्रेसलाई यो त गलपासो भएको छ । त्यसैले कांग्रेस भित्रभित्रै बामपन्थी सहकार्यले पोलिएको छ । अधिनायकवाद आउँछ भन्ने उसको आरोप कुनै तथ्यमा आधारित छैन । भित्र भित्रै मन पोलेर कराएको मात्र हो ।
तपाईं चाहिँ के देख्नुहुन्छ ? राजनीतिक ध्रुवीकरण भएर जानु सकरात्मक हो कि होइन ?
नेपाली जनताले भनिरहेका छन्, पार्टी धेरै भएका छन् भनेर । नीति मिल्ने, भान्सा मिल्ने, चरित्र मिल्ने भएपछि दुईवटा भएर बस्नुको केही अर्थ छैन । एक भएकै राम्रो ।
तपाईंहरु चाहिँ मिल्नुहुन्छ कि हुन्न ?
पार्टी एकताको लागि एमाले माओवादीसँग हामी मिल्दैनौ । चुनावी एकता हुन्छ तर पार्टी एकता हुँदैन । कम्युनिष्ट चरित्रको हुनुपर्छ । उनीहरुमा कहाँ छ कम्युनिट चरित्र र हामी त्यहाँ बस्न सक्नु ? त्यहाँ त जस्ता पनि मान्छेहरु छन् अनि त्यस्तो ठाउँमा कसरी हामी अटाउँछौं ? । कस्ता कस्ता मान्छे हुलेका छन् मओवादीले ? अनि त्यस्तो माओवादी हुँदा हामी अटाउनै सक्दैनौं । हामी चुनावी तालमेल गर्छाैं, यो पनि एउटा राम्रो स्ट्याण्ड हो ।
तपाईंहरु त कांग्रेससँग लालमेल गर्दै हुनुहुन्छ भनेर कुरा आएको थियो नि ?
त्यो सरासर झुट कुरा हो । शेरबहादुरजीले बोलाउनु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि नजाने कुरा भएन, गएँ । कुरा त भए । उहाँले तालमेल गरौं चुनावमा भन्नुभयो । हाम्रोमा गणतन्त्रवादीसँग चुनाव तालमेल गर्न सक्ने नीति नै छ । स्थानीय चुनावमा गर्यौं पनि । त्यसैलाई आधार बनाएर गलत ब्याख्या गरेर हल्ला चलाए । ती कुरामा कुनै सत्यता छैन ।
– चक्रपथबाट साभार ।